Filed under: ဘာသာရေး, ဆောင်းပါး — 13 Comments
>ကိုချမ်းရေစိတ်တိုလာရင် စိတ်ဖြေရာရဖို့က တရားမှတ် စိတ်ငြိမ်အောင်ထား…ဒေါသစိတ်ကို ဖျောက်…အာရုံကိုပြောင်း…ပြေရာပြေကြောင်းစဉ်းစား…စိတ်အေးသွားမှ လုပ်သင့်တာလုပ်…အဲဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ…တရားထိုင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ…နှင်း
>တရားမှတ်နည်းကတော့ အကောင်းဆုံး စိတ်ဖြေဆေးပေါ့
>ကိုချမ်းရေ..ပြန်ရောက်နေပြီလား.. ပြန်သွားကတည်းက မပေါ်လာလို့လေ .. စိတ်ဖြေဆေးလာဖတ်တာ .. ကျေးဇူး .. ခုတလော .. စိတ်ဖြေဖို့ လိုအပ်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ … ခက်တာက တစ်ခါတစ်လေ သိသိနဲ့ ပေနေတဲ့ စိတ်ကလေးပဲ …
>အကိုချမ်းလင်းနေရေ တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ သိပ်စိတ်အေးချမ်းပါတယ် ရန်ကုန်မှာတုန်းက နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် လယ်တီ သန်လျင်မှာ သင်္ကြန်တွင်း တရားထိုင်ဖူးပါရဲ့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ လက်တွေ့မရှိတော့ပဲ အခုတော့ ဘုရားတောင် ဦးသုံးကြိမ် မနည်းချပီး အပူတောထဲ အရှုပ်တွေချည်း လုပ်နေမိတော့တယ် 😦
>စိတ်ညစ်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ချို့ တစ်ချို့ အပျော်အပါး အသောက်အစား ဘက် ရောက်မသွားပဲ ဘုရား တရားနဲ့ နေတာ အကောင်းဆုံးသော စိတ်ဖြေဆေးပါ…
>ဟုတ်တယ်အစ်ကိုဒီစိတ်ဖြေဆေးကအရမ်းကောင်းတယ်။မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ မကြာခဏထိုင်ဖြစ်ပေမယ့်ဒီမှာတော့ ဘုရားဝေး တရားဝေးဖြစ်နေတယ်။စိတ်ညစ်တဲ့အခါ စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခါမှသာဘုရားတရားကိုသတိရတော့တယ်လေ။
>ဟုတ်တယ် အစ်ကို တရားနာခြင်း အကျိုးကျေးဇူးကတော်တော်လေးထိရောက်တယ် ဗျ . . . စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတယ် . . . ထူးထူးခြားခြား အကျိုးကျေးဇူးရှိတာတော့အမှန်ပါဘဲ ဗျာ . . .
>အေးချမ်းနေတဲ့ စိတ်က တည်ငြိမ်နေမှာပဲနော်..ပြီးတော့ သတိ အမြဲ ကပ်နေမှာပဲ..တရားထိုင်တာ ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ..ပျော်ပါစေ
>တရားထိုင်တာက အကောင်းဆုံးပါ့ပဲ။ ဒီရောက်ပြီးကတည်းက တရားထိုင် မထိုင်ဖြစ်တော့ဘူး ကိုချမ်းရေ။။ စိတ်ဆိုးလာရင်တော့ စာရွက်တွေ ထိုင်ဇြဲနေလိုက်တယ်။ 🙂
>ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်မြဲဖို့ စိတ်က အဓိကဆိုတာကို တနေ့က ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ဂိုးသမားအကြောင်း ကြားပြီးမှ ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲ ခံစားတတ်လာတယ် ကိုချမ်းရေ…တရားထိုင်တာ ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင်ထိန်းတဲ့ နည်းတခုမို့ ကျင့်ကြံနိုင်ရင် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး…အခုလိုမျှဝေတာ တကယ်မွန်မြတ်တာမို့ ချီးကျူးပါရဲ့ဗျာ…းဝ)
>တခါတလေမှ စိတ်ညစ်နေရင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ ဒေါသစိတ်ကို ပြေအောင် ဖြေဖျောက်ရတာ ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာ တခုပါပဲ။ အကိုပြောသလို တရားလေးမှတ်ရင် စိတ်ကိုအာရုံပြောင်း နိုင်အောင် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါ့မယ်။ တချို့သောသူတွေဟာ စိတ်ညစ်ရင် လမ်းမှားကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ အခုလို စိတ်ကိုဖြေသိမ့်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကို ညွှန်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို။ခင်မင်လေးစားလျှက်